Fahadisoana amin'ny famoronana tranokala ratyy indrindra: Ohatra 10 amin'ny tranonkala ratsy
Na efa nianatra tany amin’ny oniversite eo an-toerana ianao, rehefa namorona tranonkala nandritra ny taona maro, na misy fianarana am-mazoto eo am-pandehanana, misy zavatra tsy tokony hataon’ny mpamorona tranonkala rana tiany nyanyina aminnyny tranokalany.
Mety efa naheno ny teny cangkul "dity ”Raha ny momba ny tranonkala iray.
Ity dia midika fotsiny cangkul tranonkala iray izay tian’ilay mpitsidika hijanona – tranonkala iray izay mijanona amin’ny tranokala sy izay manoritra azy ary matetika izy io. Maro ireo singa izay miditra amin’ny tranonkala iray marefo fa resaka lohahevitra hafa izany.
Na dia izany aza dia misy ny fahadisoana sasany amin’ny web design izay afaka mamorona tranonkala iray izay tian’ny mpitsidika mandositra. Ireto ny design no-no ny tokony hisorohana.
1 Fahadisoana # 1: Warna Jarring
1.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Moradito
2.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Pine-Sol
3 Fahadisoana # 3: Faharetan’ny fotoana fanodinana
4 Fahadisoana # 4: Jadilah loatra ny dokam-barotra
4.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Hemmy.net
5 Fahadisoana # 5: Penyuntingan Foto Amatur
5.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Clan D-Sign Clan
6 Fahadisoana # 7: Fomba fiasa tikus
6.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetia: LawnSignDirectory.com
7 Fahadisoana # 8: Famoahana lahatsoratra
7.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Segitiga Bermuda
8 Fahadisoana # 9: Tipu
9 Fahadisoana # 10: Famoronana tranokala ratyy indrindra – tikus fa tsy azonao hazavaina akory
9.1 Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Ny fiainana
Fahadisoana # 1: Warna Jarring
Rehefa manomana ny lohahevitry ny tranonkalanao ianao dia manandrama misafidy loko mifanampy. Mahalana ny mavo no fiasa ho loko lehibe, na dia mety tsara ho mainan ny aksen aza. Ny fampiasana ny loko rehetra amin’ny avana dia zara raha misy hevitra tsara koa.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Moradito
Ity tranonkala ity dia mampiasa ny loko rehetra azo raisina ao anaty lozisialy. Ny fomba tokana hamaritana azy dia cerewet.
Raha mameno ny habakao amin’ny sary ianao, misy zavatra roa samihafa.
Voalohany, lasa sahirana tokoa ny pejy ka mety tsy fantatra amin’ny mpitsidika ny toerana anaovana tsindrio na izay tiany jerena aloha.
Faharoa, raha toa ka misy serivisy Internet miadana kokoa ny mpampiasa iray, dia mety ela loatra ny pejy hitondrana azy. Rehefa afaka 30 segondra, ny ankamaroan’ny olona dia handao sy hifindra amin’ny tranokala hafa. Miaina ao anatin’ny vanim-potoana iray eo noho eo isika rehetra. Raha tsy mahasarika ny sain’ny mpanjifa ianao ao anatin’ny segondra vitsy dia atahorana ho very tanteraka ianao.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Pine-Sol
Nahazo sary be dia be ny tranokala iray fa tena mifangaro. Eo an-tampon’ny sary marobe, ny sary dia mivezivezy manerana ny pejy rehetra, ka na dia te-hanindry azy amin’ny sary iray aza ny mpitsidika dia tokony hanenjika azy ireo izy.
Fahadisoana # 3: Faharetan’ny fotoana fanodinana
Ny fampidirana singa loatra, mainan ny flash, feo, horonan-tsarimihetsika avo lenta, na script java, dia mety miteraka tranokala hamitram-bidy kokoa sy mora kokoa. Tadidio fa ny ankamaroan’ny mpitsidika dia hanana haingam-pandeha haingana, mbola misy mpanjifa any ambanivohitra izay hiantso ny fifamoivoizana ary tsy afaka miditra amin’ny tranokalanao raha mihodina loatra.
Fahadisoana # 4: Jadilah loatra ny dokam-barotra
Ny vohikala sy bilaogy votoaty dia manangona vola avy amin’ny dokam-barotra fa tsy hivarotra vokatra. Na dia izany aza dia misy mpampiasa tranonkala maro tsy mahomby amin’ny famoahana dokambarotra be loatra ka tsy afaka milaza ny fahasamihafana misy eo amin’ny votoaty sy ny doka ny mpitsidika. Raha mila mitady ny lahatsoratra na ny lahatsoratra sisa ny mpitsidika, dia misy dokambarotra menjadi loatra ao amin’ilay pejy. Ny dokambarotra iray na roa napetraka ao amin’ilay tranonkala dia tsara indrindra. Mihoatra noho izany ary mety hampahatezitra ny navigator ianao.
Raha ny marina, ao amin’ny tatitra dokambarotra dizitaly notarihan’ny Upstream sy YouGov tao amin’ny 2012, dia nahatsikaritra fa ny manodidina ny 20% ny mpanjifa dia nilaza fa raha misy orinasa dokambarotra loatra, dia tsy hampiasa io orinasa io intsony izy ireo.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Hemmy.net
Ao amin’ny pejy maromaro amin’ity tranonkala ity, ny faritra iray manontolo eo amin’ny sehatra dia ny adiresy karazana 90. Mba hahatongavana amin’ny votoatin’ny pejy dia tsy maintsy mamaky ny bokotra. Na eo aza, misy ny dokam-barotra fanampiny niely nanerana. Tena manelingelina izany fa sarotra ny mifantoka amin’ny tranokala.
Fahadisoana # 5: Penyuntingan Foto Amatur
Tsy misy na iza na iza mitabataba mihetsiketsika kokoa noho ny sary izay tsy navoaka tsara. Ireo tranonkala misy an’io karazana olana io dia mety hanapaka sary miaraka amin’ny sisin-dambany, ny loko mihodina amin’ny endritsoratra izay manalavitra, ny teknika tsy mahasalama izay mampiseho fa sary roa no nampifangaroina na fampa.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Clan D-Sign Clan
Tsy mbola nanova ny lokon’ny teny avy amin’ilay endrika mahazatra nomanin’ny MS ny mpamorona. Tsotra io volavola io ka azo ekena avy hatrany ho mainan ny maoderina Microsoft sy ny Art Art.
Eo ambonin’izany, misy pejy pop-up miezaka manantona. Mety ho tsy azo tsinontsinoavina izy raha toa ka tsara kokoa ny famolavolana rehefa vantany vao tafiditra ny intro ianao ary tsindrio mankany amin’ny pejy lehibe. Na izany aza, ny famolavolana pejy mifandray (eto ambany) dia ke mahomby ihany.
Fahadisoana # 7: Fomba fiasa tikus
Na dia manana endrika endrika manintona aza ny tranokala iray, dia mety hiteraka fahasosorana ny mpitsidika ary miala amin’ny fanamoriana ratsy.
Ohatra, ny tranonkala tsy misy rohy mazava na miaraka amin’ireo zavatra maro be dia sarotra ny manapa-kevitra cangkul aiza no haleha. Ny olana iray izay atrehan’ny tompona tranonkala dia tranonkala kely miakatra lehibe kokoa. Ny fanamoriana izay niasa rehefa manana pejy dimy ny tranokala fotsiny dia tsy mandeha raha tsy misy pejy 500 ny tranokala. Jereo ny fomba ahafahana mamerina sy miverina amin’ny sokajy sy sokajy sokajy ilay tranokala, mba hahatakaran’ny mpitsidika ny toerana halehany. Fa hendry koa ny manampy boaty karoka.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetia: LawnSignDirectory.com
Ny mpitsidika dia manantena torolàlana azo antoka amin’ny faritra misy azy, fa kosa misy rohy ampolony amin’ny lisitra havia, ny dokam-barotra ankavanana, ary ny orinasa vitsivitsy. Ity tranonkala ity dia afaka mandray soa avy amin’ny fanavaozana ny rafitra fandaminana, mba hahafahan’ny mpitsidika mahita ny loharano izay hazain’izy ireo.
Fahadisoana # 8: Famoahana lahatsoratra
Ireo mpamorona tranonkala mampiasa sary henjana ary avy eo dia manangona lokon’ny loko izay tsy mifanohitra loatra ny mifanohitra aminy dia mamela ny pejy web-ny tsy hay soratana. Raha manelingelina ny mason’ny mpitsidika rehefa avy mamaky lahatsoratra iray, nahoana izy no miezaka mamaky pejy maro ao amin’ny tranonkalanao? Raha tsy maintsy misafidy lohahevitra be atao ianao, fara-faharatsiny, mametraha boaty iray, boaty, na tabilao miaraka amin’ny fototra miorim-paka ary mifidy loko iray mifanohitra aminy. Miezaha hisoroka volom-pasika mena, fa mifidy fotsy amin’ny mena maitso, mainty mavo amin’ny manga, etc..
Ireo teny izay mifandrindra ny hafa dia sarotra ihany koa ny mamaky mainan ny fehintsoratra izay ampahany amin’ny sarimihetsika an-tapitrisany ary ampahany amin’ny fototra mafy orina.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Segitiga Bermuda
Tsy olana fotsiny ny olana eo amin’ity tranonkala ity, fa ny andininy kosa dia mandingana andininy hafa, ka tsy ho vita mihitsy ny hamaky azy.
Fahadisoana # 9: Tipu
Tsy misy feo mihoatran’ny tsy mahavita zavatra mihoatra noho ny olana manahirana sy ny fitsipi-pitenenana. Na dia tsy misy olona lavaries aza dia azonao atao ny manatona akaiky. Mangataha namana sy fianakaviana mba hijery ireo pejinao ary hanampy anao hahita ireo fahadisoana ireo, na manakarama mpanoratra matihanina hanamarina ny pejyo. Ny ohatra etsy ambany dia tena mahafinaritra. Tsy orinasa tena izy io izany, fa mijery amin’ny fomba mahatsikaiky ny fomba tsy fisian’ny orinasa sasany.
Fahadisoana # 10: Famoronana tranokala ratyy indrindra – tikus fa tsy azonao hazavaina akory
Ny tranonkala sasantsasany dia tena secara intrinsik, tena tikus amin’ny famolavolana. Ireo tranonkala tsy dia noforonina ity – tsy zavatra iray mahatonga ny tranokala mampalahelo ny masonao, fa saika ny zavatra rehetra ao amin’ilay tranokala.
Mety misy ny loko malefaka, ny fiara tsy matihanina ary ny zavatra hafa. Soa ihany fa tsy dia fahita ireny toerana ireny, fa ny fijerena azy ireo dia afaka manampy anao hahafantatra izay tsy mba hatao rehefa mamorona ny tranonkala.
Ohatra an’ny tranonkala cerewetite: Ny fiainana
Tena mahatsiravina ity tranokala ity ary sarotra ny mamaritra azy. Voalohany, izay mora tairina amin’ny fakana dia tsy tokony hisaraka amin’ity tranokala ity, satria azo inoana fa mitarika ny fandrobana any amin’ny olona tsy misy mpangalatra aza. Ny horonan-tranonkala dia feno sary manafintohina sy sary mamirapiratra. Etsy an-danin’izany, ny sary dia tsy manintona ny ankamaroany, mifarana amin’ny zazakely amin’ny tarika ary milalao gitara. Tsidiho raha sahy ianao.